Anna Musharrax baan ahay! W/Q Bashir M. Hersi | RBC Radio	Home
Thursday, September 6th, 2012 at 02:48 am	/ 1 Comment Chirchiroow Fariintaada Fariin Baa Xigi Doonta. W/Q Wardoon Ali
Tuesday, September 4th, 2012 at 12:38 am	/ 8 Comments Sunday, June 24th, 2012 at 07:36 am Anna Musharrax baan ahay! W/Q Bashir M. Hersi
Juunyo 24 2012
Heerarka nolshu kala tahay ayaa ah: nagi deganaan iyo naxdin dagaaga u dhaxaysa, midda dambe waa hoy, hergal iyo hoyaad la’aan, dhalandhool aan dhammaad lahayn ayey dhalisaa. Halka midda hore tahay guri nabada, geeddi nabada iyo guur nabada, Abwaan Maxamed Ibraahin warsame Hadraawiayaa yiri:
Labadan hab, mid na soo maray ma jiraa? Hubaal kan dambe inaan iminka ku sugan nahay, balse, weydiinta qotonta yaa ah; midda hore iyada ma soo aragnay? Hadday haa tahay, maxaan ku soo aragnay? Hadday maya tahay, maxaanan ku soo arag? Isu gayn, waa hanjabay, heeryo dedan, hammi laaban iyo himilo joogta ah, Allow adaa hawl ku filan!
Himilana ma duuganto, ee waxaa dilma qofka ay dareenkiisa ku daaban tahay! Hirgalinta himiladase waxaa masuul ka ah arrimahan: “Hoodo” [ayaan, ama nasiib “Hoodiyo ayaanbaa,Lagu kala horreeyaa”] “Hiillo xilli” [Waligeed adduunyada,Waqtigaa qof saacida, Qofna waayaha xira!] “Hal adayg” [Dadaal gaari doon tide].
Sidaa waxaan u leeyahay, ugu horrayn, waxaan ku jirnaa KALA GUUR, horayna ugu jirnay KU MEEL GAAR, dhanka kale, waxaa foodda nagu soo haya sida la yiri GACAN TAAG/DOORASHO, YAA QABAN? SIDEE LOO QABAN? YAA LOO QABAN? XAGGEE LAGU QABAN?MAXAA LOO QABAN?MAXAA LAGU QABAN?Waa weydiimo aan la is weydiin, malaha aqriste, hadda ayaaba kuugu horraysa, dabcan, warcelintaadu waxay ku koobnaan XILDOON. Hubaal inaad saxan tahay, aanse sii baarbaaro sida wax yihiin.
Sida loo iclaanshay inaan bisha siddeedaad aysan doorashadu ka daba marayn, waa haddii ayba xilligaa dhici kartee, ayaa waxaa soo badanaya in todobaadkiiba aad maqashomusharrax u tartamaya xilka madaxweynenimada, qaarkood inaad maqashay waa laga yaabaa, si aad ku maqashaba, xumaan iyo samaan, hawlkarnimo iyo habacsanaan, maqalka wax dhaafsiisanse lama hayo.
Dhadhanshaa waalay, waa mid hadda ka hor xil soo qabtay, Madaxweyne,Rariisul wasaare, Wasiir, Danjire IWM oo u hamuun qaba mar qura in madaxweyne la dhaho, ama loogu celiyo.
Dalku uma baahna Madaxweyne kaliya, uma baahna Ra’iiusl wasaare kaliya, uma baahna Wasiirro kaliya, uma Xildhibaanno kaliya, uma baahan Danjireyaal kaliya, uma baahnaa Kaaliyayaal kaliya, uma baahna Xoghayeyaal kaliya, uma baahna Sarreeyayaal kaliya, uma baahna … uma baahna… intaa iyo ka badan ayuu u baahan yahay, maamul dheellitiran, maarayndhug legiyomadax dhiirran.
Abwaan Mustafe Sheeekh Cilmi ayaa horay ugu maansooday: “Madaxweyne mar u dhaha!” hadda sidaa ayey dadka ka taagan tahay, ama wayba ka haysaa, oo haddaan la dhihin qaarbaaba qandhanaya, qaar waaba suuxayaan, Allow adaa Qaadira. Maxaa quus la taagan yahay!
Tags: Anna Musharrax baan ahay!, Bashir M. Hersi	3 Responses for “Anna Musharrax baan ahay! W/Q Bashir M. Hersi”
runta sheeg says:	June 25, 2012 at 2:12 pm	Adeer kaa diidnay Sheekadaas Raqiiska ah!
Waxa dhabta ah ee laabta aad ku hayso, noo sheeg!
Ma Qofkii aad jeclaan lahayd baa ku liita?
awoowe says:	June 25, 2012 at 3:23 pm	ishaa ka tuurtay sxb somaliya waxay noqotay meel ay bagamuundada qurvba joogta ay iygo profesor dr been ah wata u xamaali tagaan xildoon xoolo doon ah loloollllllll
boolimoogmedia.com » Anna Musharrax baan ahay! W/Q Bashir M. Hersi says:	June 25, 2012 at 11:09 pm	[...] Sida caadada ah, maamul iyo nidaam la’aanta waxaa ka dhasha fawdo baahsan, oo aan laga maagan karin, kala daadsanaan baaxadle iyo dayac badan. Dhanka kale, waxaa xoogaysta kalitalinta, amar ku taaglaynta, kooxaysiga, iyo is urursiga. Intuba waxay ku hirgalaan kaalinta qofka, qoyska ama qabiilku bulsada uga jiro, sidoo kale, iskaashigu wuxuu salka ku hayaa dano gaara oo isa soo gaaray iyo sidii loo gundhigi lahaa. [...]